देशभर ४१०७ संक्रमित थपिए, ३५ जनाकाे नि’धन ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/देशभर ४१०७ संक्रमित थपिए, ३५ जनाकाे नि’धन !
काठमाडौं : पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ४१०७ जनामा को’रो ना संक्र’मण देखिएको छ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले पौडेलले पीसीआर परीक्षणबाट २९७५ जना र एन्टिजेन परीक्षणबाट ११३२ जना मा संक्र’मण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयाे ।
पीसीआर परीक्षण गरिएका मध्ये २६ं२ प्रतिशतलाई संक्र’मण पुष्टि भएको र यो दर निकै माथि रहेको अधिकारीले सचेत गराउनु भयो । २४ घण्टामा जम्मा १६ हजार २९८ नमुना परीक्षण भएको छ । जसमा पीसीआर परीक्षण ११ हजार ३५४ र एन्टिजेन परीक्षण ४ हजार ९४४ भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार २४ घण्टामा १५३५ जना को’रो ना मुक्त भएका छन् ।
को’रो नाबाट ३५ जनाको मृ,त्यु भएको छ। हालसम्म पिसिआर विधिबाट ७ लाख ५ हजार ७२ जना र एन्टिजेन ६४ हजार ८८५ विधि गरी ७ लाख ६९ हजार ९२२ जनामा को’रो ना पुष्टि भएको छ । को’रो ना मुक्त हुनेको संख्या ६ लाख ६६ हजार ६५१ पुगे को छ । को’रो नाबाट मृ,त्यु हुनेको कुल संख्या ९ हजार ९५७ पुगेको छ । अहिले देशभर सक्रिय संक्र’मितको संख्या ३३ हजार ४६४ पुगेको छ ।